कानुन नै परिवर्तन गरेर रुस-युक्रेन युद्धमा जर्मन घुस्यो, के गर्लान पुटिन ? — Imandarmedia.com
कानुन नै परिवर्तन गरेर रुस-युक्रेन युद्धमा जर्मन घुस्यो, के गर्लान पुटिन ?
एजेन्सी। जर्मनीले युक्रेनमा हतियार र एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल सहयोग गरेको छ। जर्मन प्रेस एजेन्सीबाट युक्रेनी सरकारका अधिकारीलाई उदृत गर्दै जनाइए अनुसार जर्मनीबाट १ हजार ५ सय स्ट्रेला एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल र १ सय एमजी३ मेसिन गनको एक खेप युक्रेन पुगेको हो।